May 22, 2020 1732
अनिल गुरुगंले सोनिका’लाई फोन गरे । उनले आफु प्रहरी हुँ भन्दै सोनिकालाई फोन गर्दा उनले उनका’ विषयलाई लिएर गरिएको चर्चाका विषयला’ई जोडेर उनले प्रश्न गरेका थिए । उनले आफु’लाई प्रहरी भनेर सोनिकालाई फोन गरे ।
पूर्व युवराज पारस शाहको १२ लाख चोरी गरे’को आरोप लगाउँदै एउटा मिडियाले समा’चार बनाएपछि निकै चर्चा भएको थियो । अनिलले सोही विषयलाई लिएर प्राग्कं’ गरेका थिए । पूर्व युवराज पारसको १२ लाख लिएर गएको भन्ने विषयलाई लिएर उनले फो’न मार्फत रमाइलो गर्ने कोशिष गरेका छन् ।
उनले म प्रहरी इन्सपे”क्टर हरी वम्ज’न हुँ भन्दै फोन गरेका थिए । तर सोनिकाले केही वे’रमा उनलाई चिनिन् । उनले त्यो नाम निकै रमाइलो लागेको र तपाई अनिल हो भन्दै भनेकी थिइन् । उनले यतिवेला आफु वझागंमा रहेको र आमावुवासंग समय विताइर”हेको बताएकी छन् । उनले आफुसंग रेखापनि संगै रहेको बताएकी छन् ‘।
उनले आफुवा”रेमा त्यस्तो लेख्ने का”म नपाउनेहरु हुन भनेकी छन् । उनले आफु म चोर्ने जस्तो देखि”न्छु र ? आफु आत्म’निर्भर रहेको बताइन्, उनले आफ्नो छुट्टै विजनेश रहेको र युट्युव पनि चलाउ’ने गरेको बताएकी छन् ।
मंले संसार देखि’सकें, अनि मलाई १२ लाख चोरेको आरोप लगाउने, त्यती १२ लाख त मैले क’पडामै उडाएको छु, उनले भनिन्, मानिसहरुले फसाउन खोजेपछि मान्छेले त्यसै पत्याउने पनि रहेछन् । एकै पटक १२ लाख पनि आउने रैछ त्यस्तो पनि पत्या’उने ? उ’नले ब्यग्यं गर्दै भनिन् ।
उनले आफु अहिले सारी लगाएको बताउँ’दै आज आफ्नो एग्गेजमेन्ट पनि हुनसक्ने बता’इन् । भतिजीको जन्मदि’न पार्टीमा जान लागेकाले आफु साडीमा जान लागेको बताइन् । उनले त्यो पा’र्टीमा कोही पन पर्ने भेटिए एग्गेजमेन्ट हुनसक्ने बताइन् ।
उनले आफुले राम्रो आम्दानी गरि’रहेको बताउँदै त्यस्तो सा’नो चोर्ने काम नगर्ने बताइन् । सोनि’काले चोरी भने यस्तरी चोर्छु कि त्यो पैसाले देश बनाउन पुगोस् । उनले आफ्नो लागि बुवाआ’माले केटा खोजिसकेको पनि बताएकी छन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो मा….
Prev७ वर्षिय वालिका कोरोनालाई जितेर घर फर्किदा, देखियो यस्तो दृष्य (भिडियोसहित)
Nextकराचीमा भयान’क विमान दु:र्घटना, विमानमा यति धेरै संख्यामा….
‘छोरा निको भएर बोलाओस् ’ छोरो बोल्ने आशमा टेकु अस्प-तालको परिसरमा पर्खि`रहेका बाबुको इच्छा
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (136410)